Users badan oo xaaladaha halkaas oo ay u arkaan in ay muhiim ah si ay u beddelaan macluumaadka shakhsiga ah sida Apple ID iCloud, ID email iCloud, iCloud username ama password iCloud ay qalab (s) Apple wajihi. Halkan waxaad ku baran doontaa sida aad u gudi karo kuwa hawlaha dheer iyo wareer leh dadaalka ugu yaraan.
Sida loo beddel iCloud Apple ID
Habkan, waxaad ku dari ID cusub in aad xisaabta iCloud, ka dibna saxiixa-in si iCloud aad iPhone / iPad isticmaalaya ID cusub. Waxaad raaci kartaa fariimaha tallaabo-tallaabo hoos ku qoran si aad u samaysay shaqada:
Power on your iPhone / iPad.
Laga soo bilaabo screen Home ku, ay helaan ee tuubada Safari ka hooseysa.
Marka Safari kor u furmay, u tag appleid.apple.com.
Laga soo bilaabo midig ee bogga furay, ka jaftaa Maamul ID Apple aad .
Bogga xiga, oo ah berrimmadii heli karo, aqoonsi Apple hadda aad iyo password iyo tuubada Sign In .
Laga soo bilaabo midig ee bogga soo socda, ka jaftaa Edit ka ID Apple oo Primary Email Address qaybta.
Marka duurka ku editable u muuqataa, ku qor email aan la isticmaalin ID cusub oo aad doonayso inaad ugu bedesho hormariyo Save .
Next, u tag mailkooda ee ID Xigasho email iyo xaqiijiyo in ay xaqiiq tahay.
Kadib marka la cadeeyo, dib Safari web browser, ka jaftaa Saxiix Out dhankiisii ​​top-xaq u leeyahay inuu saxiixo oo ka soo baxay ID Apple ah.
Riix badhanka Home si ay dib ugu screen Home heli.
Tubada Settings .
Laga soo bilaabo Settings uu furmo suuqa, ka jaftaa iCloud .
Oo salka uu ah iCloud uu furmo suuqa, ka jaftaa Saxiix Out .
In sanduuqa digniin popup ah, ka jaftaa Saxiix Out .
On box xaqiijin popup ah, tuubada Delete ka My iPhone iyo sanduuqa ku xiga in booda, ka jaftaa Hayso on My iPhone in ay sii dhammaan macluumaadka shakhsiyeed ee aad taleefan.
Marka, nooca sirta ah ee aad hadda gasho ID Apple oo ku sawirnaa Dami in gab Raadi My feature iPhone.
Sug ilaa feature la demiyo, qaabeynta waa la badbaadiyey, oo si guul leh u saxiixay aad ka baxay ID Apple aad.
Riix badhanka Home marka sameeyeen, oo waxay dib ugu shaashadda Home ah, u furan Safari, u tag appleid.apple.com iyo saxiixa in la ID cusub Apple.
Riix badhanka Home ah, oo taga si Settings > iCloud .
In Beerihii heli karo, nooca Apple ID cusub iyo password u dhiganta.
Tubada Sign In .
Marka sanduuqa xaqiijinta booda hoose, ka jaftaa ku milmaan iyo sug ilaa iPhone uu diyaar u yahay la ID Apple cusub ee iCloud.
Sida loo beddel iCloud Email
Tan iyo ID email aad uu xiriir la leh ID Apple ah in aad loo isticmaalo in lagu saxiixo in si iCloud, la bedeli karaa iyada oo aan la beddelo ID Apple wadajir. Si kastaba ha ahaatee, waxaad had iyo jeer ku dari kartaa ID kale email adigoo raacaya tilmaamaha hoos ku siiyo:
Laga soo bilaabo screen Home aad iPhone, u tag Settings > iCloud .
On the iCloud uu furmo suuqa, magacaaga ka sareysa ka jaftaa.
Laga soo bilaabo ID Apple uu furmo suuqa, ka jaftaa Information Contact .
Laga soo bilaabo hoos cinwaanada emailka qaybta ka mid ah Information Contact uu furmo suuqa, ka jaftaa dar Email kale .
In duurka ka heli karaa Email Address uu furmo suuqa, ku qor cinwaankaaga cusub la isticmaalin email iyo tuubada qabtay dhankiisii ​​top-midig.
Next, isticmaali web browser wax ku computer ama iPhone si loo xaqiijiyo cinwaanka email ah.
Sida loo beddel iCloud Password
Raac tallaabooyinka 1 iyo 2 ka Email Sida loo beddel iCloud qaybta kor lagu sharaxay.
Marka ku ID Apple uu furmo suuqa, ka jaftaa Password & Amniga .
On the Password iyo Amniga ee suuqa kala, ka jaftaa Change Password .
On the Aqoonsiga Hubi suuqa kala, bixiyaan jawaabo sax ah si su'aalo ammaanka iyo ka jaftaa Hubi dhankiisii ​​top-midig.
In Beerihii heli karaa Change Password uu furmo suuqa, ku qor password hadda, password cusub, iyo xaqiijin sirta ah oo cusub.
Riix Change dhankiisii ​​top-xaq.
Sida loo beddel Username iCloud
Raac 1 iyo 2 tallaabooyinka ka Sida loo beddel Email iCloud qaybta kore.
Laga soo bilaabo dhinaca kore ee midigta ah ID Apple uu furmo suuqa, ka jaftaa Edit .
In Beerihii editable, bedelo magacyada hore iyo intii dambeba la kuwa cusub.
Optionally sidoo kale aad ku sawirnaa ka edit doorasho ka yar meel profile sawirka in lagu daro ama aad bedesho profile sawirka.
Marka aad ku qanacsan tahay isbeddelka, tuubada qabtay dhankiisii ​​top-midig.
Sida loo beddel Settings iCloud
Mar kale raacaan 1 iyo 2 tallaabooyinka ka Sida loo beddel iCloud Email of tutorial this.
Laga soo bilaabo ID Apple uu furmo suuqa, ka jaftaa Qalabka ama Lacagta sida loogu baahan yahay, xaqiijiyo siidaayay aad ID sida kor ku wada hadleen, iyo isbedel ku habboon ayaa loo baahan yahay.
Hubi inaad raacdo tallaabooyinka kor ku xusan si sax ah la siin. Configuring goobaha ay si khalad ah waxay keeni kartaa in iDevice misconfigured, oo laga yaabaa in aad raacdaa habka ku dheer galabsaday sirta lumay ama resetting qalab aad wadajir.
> Resource > iCloud > Guide Full in aad bedesho Account iCloud ka mid yihiin ID / Email / Password / Username